रूसमा आमा दिवस | Absolut यात्रा
मातृ दिवस एक विशेष छुट्टी हो जुन विश्वभर मा सबै आमाहरुको स्मरणार्थ मनाईन्छ र प्रेम र संरक्षणको लागि धन्यबाद दिन्छ जुन उनीहरुले आफ्ना बच्चाहरु लाई जन्म बाट दिन्छन्।
यो एक अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव हो, प्रत्येक देश मा यो बिभिन्न दिन मा मनाइन्छ, सबैभन्दा सामान्यतया मे मा दोस्रो आइतवार हो, यद्यपि। यद्यपि, रूसमा मातृ दिवस अर्को मितिमा लिइन्छ। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यो देशमा कसरी मनाइन्छ?
1 रूसमा मातृ दिवस कस्तो छ?
2 मातृ दिवस को शुरुवात के हो?
3 अन्य देशहरूमा मातृ दिवस कहिले मनाइन्छ?
3.7 युनाइटेड किंग्डम
3.8 पोर्तुगल र स्पेन
रूसमा मातृ दिवस कस्तो छ?
रूसमा मातृ दिवस १ 1998 XNUMX in मा मनाउन थालियो, जब यसलाई बोर्स येल्तसिनको सरकारले कानून द्वारा अनुमोदन गर्यो। त्यस पछि यो प्रत्येक वर्ष नोभेम्बरको अन्तिम आइतवार मा आयोजित गरिएको छ।
यो रूस मा एकदम नयाँ उत्सव हो, कुनै स्थापित परम्पराहरु छन् र प्रत्येक परिवार आफ्नो तरीकाले यो मनाउँछ। जे होस्, बच्चाहरूले उपहार कार्डहरू र हस्तनिर्मित शिल्पहरू आफ्नी आमालाई उनीहरूको प्रेमको लागि धन्यवाद दिन्छन् र आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्छन्।
अन्य व्यक्तिहरूले एउटा विशेष पारिवारिक भोजन बनाउँदछन् जहाँ उनीहरू आमालाई उनीहरूको कृतज्ञताको प्रतीकको रूपमा पारंपरिक फूलहरूको सुन्दर गुलदस्ता दिन्छन्, एक मायालु सन्देशको साथ।
जे भए पनि, रूसमा मातृ दिवसको लक्ष्य पारिवारिक मूल्यमान्यताहरू र आफ्ना बच्चाहरूप्रति आमाको प्रेमको गहिरो अर्थ र यसको विपरित प्रचार गर्नु हो।
मातृ दिवस को शुरुवात के हो?
हामी Greece००० वर्ष भन्दा पहिले पुरानो ग्रीसमा मातृ दिवसको उत्पत्ति भेट्टाउन सक्छौं जब रेको सम्मानमा समारोहहरू आयोजना गरिएको थियो, देवहरूको टाइटेनिक आमा ज्यूस, हेड्स र पोसेडन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
रेको कथाले बताउँछ कि उनले उनको छोरा ज्यूसको ज्यान बचाउनको लागि आफ्नै पति क्रोनोसलाई मारे किनभने उनले आफ्ना बुबा युरेनसलाई जस्तै सिंहासनबाट हटाउन नपाओस् भनेर आफ्ना पहिलेका बच्चाहरूलाई खाए।
क्रोनोसलाई ज़ीउस खानबाट रोक्न, रेआले एउटा योजना बनाई र आफ्नो पतिलाई खानपिनको लागि डायपरसहित एउटा ढु dis्गाको भेष बनाई, उनी वास्तवमा क्रेट टापुमा हुर्कदै गर्दा आफ्नो छोरा भएको विश्वास गर्छिन्। जब जियस वयस्क भए, रेले क्रोनोलाई पेसन बनाउने प्रबन्ध गरे जसले आफ्ना बाँकी बच्चाहरूलाई बान्ता गरे।
उनले आफ्ना बच्चाहरूप्रति देखाएको प्रेमका लागि ग्रीकहरूले उनलाई श्रद्धाञ्जलि दिए। पछि, जब रोमीहरूले ग्रीसका देवताहरू लिए तब उनीहरूले यो उत्सव पनि ग्रहण गरे र मार्चको मध्यमा रोमको सिबल्सको मन्दिरमा (पृथ्वीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने) देवी हिलारियालाई तीन दिनसम्म बलिदान चढाइन्थ्यो।
पछि, इसाईहरूले ख्रीष्टको आमा भर्जिन मरियमलाई सम्मान दिन मूर्तिपूजक उत्पत्तिको छुट्टिलाई अर्कै रूपमा परिवर्तन गरे। December डिसेम्बर the मा क्याथोलिक सन्तहरूमा अविरल कन्सेप्टको उत्सव मनाइन्छ, यो तिथि वफादारहरूले मातृ दिवसको उपलक्ष्यमा अपनाए।
२० औं शताब्दीमा संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले १ 1914 १। मा मेको दोस्रो आइतवारलाई आधिकारिक मदर डेको रूपमा घोषणा गरे जुन विश्वका अन्य धेरै देशहरूमा पनि प्रतिबिम्बित भएको थियो। यद्यपि क्याथोलिक परम्परा भएका केही देशहरूले डिसेम्बरमा छुट्टी मनाउन जारी राखे पनि स्पेनले यसलाई मेको पहिलो आइतवारमा सार्नको लागि छुट्यायो।
अन्य देशहरूमा मातृ दिवस कहिले मनाइन्छ?
यो देश मेमा दोस्रो आइतवार मातृ दिवस मनाउँछ। हामीलाई थाहा छ यो तरिकाले गर्ने सबैभन्दा पहिलो यो अन्ना जार्भिस थियो जसले सन् १ 1908 ०1910 मा भर्जिनियामा उनको दिवंगत आमाको सम्मानमा सम्मान गर्‍यो। पछि, उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मातृ दिवसलाई राष्ट्रिय बिदाका रूपमा स्थापना गर्न अभियान गरे र सन् १ XNUMX १० मा वेस्ट भर्जिनियामा यसरी घोषणा गरियो। त्यसो भए अन्य राज्यहरूले पनि चाँडै सूटको अनुसरण गर्नेछन्।
फ्रान्समा, मातृ दिवस एकदमै नयाँ परम्परा हो किनभने यो १ XNUMX s० को दशकमा मनाउन थाल्यो। त्यो भन्दा पहिले, केहि दिन महिलाहरूको प्रयास जसले ठूलो संख्यामा बच्चाहरूलाई जन्म दिएका थिए जसले ठूलो युद्ध पछि मान्यता प्राप्त देशको दशक जनसंख्या पुनर्स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएका थिए र यहाँसम्म कि योग्यताका पदकहरू पनि प्रदान गरेका थिए।
वर्तमानमा यो मेको अन्तिम आइतवारमा मनाइन्छ जबसम्म यो पेन्टेकोस्टसँग मिल्दैन। यदि त्यसो हो भने, मातृ दिवस जूनको पहिलो आइतवारमा लिन्छ। जे होस् मिति, परम्परागत कुरा केटाकेटीको लागि उनीहरूको आमालाई फूलको आकारमा केक दिन।
यस एसियाली देशमा, मातृ दिवस पनि एक अपेक्षाकृत नयाँ उत्सव हो, तर बढी भन्दा बढी चिनियाँहरूले मे मा दोस्रो आइतवार उपहार र धेरै खुशी संग आफ्नो आमा संग मनाइरहेका छन्।
मेक्सिकोमा मातृ दिवसलाई ठूलो उत्साहका साथ मनाइन्छ र यो महत्त्वपूर्ण मिति हो। यो उत्सव भोलिपल्ट शुरु हुन्छ जब बच्चाहरूको लागि उनीहरूकी आमा वा हजुरआमालाई सेरेनडे गर्ने परम्परा थियो, कि त तिनीहरू द्वारा वा पेशेवर संगीतकारहरूको सेवाहरू भाँडामा लिएर।
अर्को दिन एउटा विशेष चर्च सेवा आयोजित हुन्छ र बच्चाहरूले आफ्नी आमालाई उनीहरूले स्कूलमा सिर्जना गरेका उपहारहरू दिन्छन्।
थाईल्याण्डकी रानी आमा, उनको महिमा सिर्किट, उनीलाई सबै थाई विषयकी आमा मानिन्छ देशको सरकारले १ 12 1976 देखि उनको जन्मदिन (अगस्त १२) मा मातृ दिवस मनाएको छ। यो एक राष्ट्रिय बिदा हो जुन आतिशबाजी र धेरै मैनबत्तीहरूको साथ शैलीमा मनाइन्छ।
जापानमा मातृ दिवसले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि धेरै लोकप्रियता प्राप्त गर्‍यो र हाल मेमा दोस्रो आइतबार मनाइन्छ।
यो छुट्टी घरेलु र परम्परागत तरिकामा बस्दछ। सामान्यतया केटाकेटीले आफ्नी आमाको चित्र कोर्दछन्, भाँडा तयार गरिदिनुहोस् जुन उनीहरूले खाना पकाउन सिकाएका थिए र उनीहरूलाई गुलाबी वा रातो कार्नेसन पनि दिन्छन् किनकि उनीहरूले शुद्धता र मिठासलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
बेलायतमा मातृ दिवस युरोपको सब भन्दा पुरानो बिदा हो। १ XNUMX औं शताब्दीमा, वर्न्ट मेरीको सम्मानमा लेन्टको चौथो आइतवारलाई मदरिंग आइतवार भनिन्थ्यो। र परिवारहरूले सँगै भेला हुने, ठूलो समूहमा जान र दिन सँगै बिताउने अवसर लिए।
यस विशेष दिनमा, बच्चाहरूले आफ्नी आमाको लागि बिभिन्न उपहारहरू तयार गर्दछन् तर त्यहाँ एउटा छ जुन छुटाउन सकिन्न र यो सिम्नल केक हो, माथिल्लोमा बदाम पेस्टको लेयरसहितको स्वादिष्ट फल केक।
पोर्तुगल र स्पेन
दुबै स्पेन र पोर्चुगलमा, मदर्स डे डिसेम्बर the मा बेइज्जत कन्सेप्टको अवसरमा मनाइन्थ्यो तर अन्ततः यसको विभाजन भयो र दुई उत्सवहरू अलग गरियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » रूसमा मातृ दिवस